Nangalatra ianareo -
26/12/2018 admintriatra Tresaka 0
Hifantoka eny amin’ny vaomiera mahaleo tena misahana ny fifidianana ny mason’ny mpanara-baovao manomboka rahampitso. Na dia efa nisy aza mantsy ny fangatahanana tao mba hisian’ny mangarahara sy ny fampitahana ny voka-pifidianana, dia maika sy dodona amin’ny famoahana ny vokatra tsy ofisialy ny CENI. N’inona na inona anefa lazaina, na inona na inona tenenina, nisy ny hosoka sy ny hala-bato tamin’ny fihodinana faharoa tamin’ny fifidianana izay ho filoham-pirenena. Betsaka ny porofo nanamarina izany no tsy azo lavina ny fisiany, ary midika fa nangalatra ianareo mpanaraka sy momba ny kandida faha-13.
Ohatra mivaingana tsy azo lavina ny nahatrarana ireo bileta tokana efa voamarika mialoha. Tsy ny mpifaninana amin’ny kandida 13 mihitsy no hanana tombontsoa amin’ny fanamarihana mialoha ny bileta tokana misafidy ny 13 fa dia nangalatra ianareo.
Efa nisy ihany koa ireo nijoro vavolobelona tamin’ny baiko midina sy ny tsindry nataon’ny minisitry ny Atitany ny amin’ny fomba hamadihana ny vokatry ny fifidianana, ka hanomezana tombony ny kandida 13. Midika izany fa nangalatra ianareo.
Tsy lazaina intsony ny fahaizanareo namadika ny voka-pifidianana tamin’ny birao fandatsaham-bato teto Antananarivo. Eto an-drenivohitra aza moa vitanareo ny namadika izany vokatra izany, maika fa any amin’ireo tany lavitra andriana ? Porofo mitohoka amin’ny tenda izany fa nangalatra ianareo.
Mafy loatra ho an’ity kandida 13 ity ny te hiverina amin’ny fitondrana ka nanaovany ny fomba rehetra ahazoany ny fandresena. Efa tsy zava-baovao ho azy rahateo ny lalao maloto amin’ny alalan’ny halatra, fa anisan’ireo efa nitondra faisana tamin’izany ny harem-pirenena.
Hatreto aloha, dia mitodika hatrany any amin’ny kandida 13 ny fisian’ireo hosoka sy hala-bato tamin’iny fifidianana iny. Ka n’inona n’inona lazainareo : nangalatra ianareo.